Child – Page9– Healthy Life Journal
Pediasure နို့မှုန့်နှင့် ကလေးအသက်အရွယ်
မေး. Pediasure နို့မှုန့်ကို ဘယ်နှနှစ်မှစတိုက်ရလဲရှင်။ ကလေးက တစ်နှစ်ခွဲရှိပြီ တိုက်လို့ရပါသလားရှင့်။ San Thida (FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့်မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. Pediasure နို့မှုန့်ဘူးမှာ ရေးထားလေ့ရှိပါတယ်။ Pediasure ကို အသက် ၂ နှစ်ကနေ အသက်...
ခေါင်းတွင် ကင်ဆာအကျိတ်ထွက်နေသည့် နှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အား ဆက်လက်ဆေးကုခွင့် မိသားစုကငြင်းပယ်
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့မှ အသက် ၂နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ဟာ ခေါင်းတစ်ခြမ်းမှာ ကင်ဆာအကျိတ်ကြီး ထွက်နေပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၉လကတည်းက အသားစယူစစ်ဆေးကြည့်ရှုခဲ့ပြီး ကလေးမှာကင်ဆာဖြစ်နေကြောင်း သိရှိခဲ့ပါတယ်။ ကင်ဆာဆေးသွင်းကုသမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ရပြီး ဆရာဝန်တွေက ဦးနှောက်၊ ပါးရိုးနဲ့ မေးရိုးအစိတ်အပိုင်းတွေကို ဖယ်ရှားခွဲစိတ်ဖို့...
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) မိုးတွင်းကာလ ရောက်လာတဲ့အခါ အအေးမိ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၊ ခြင်ကတစ်ဆင့် ရနိုင်တဲ့ရောဂါ၊ ရာသီတုပ်ကွေးစတာတွေကြောင့် မိဘတွေအနေနဲ့ကိုယ့် ရင်သွေးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ပူပင်သောက တွေဖြစ်ကြရပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိုးတွင်းကာလ သင့်ကလေး ကျန်းမာနေစေဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက်တွေကို...
မိုးရာသီတွင် အဖြစ်များသည့် အရေပြား မှိုစွဲ ပြဿနာများ
ပါမောက္ခဒေါ်မြတ်စန္ဒာကျော် (အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး ။ မိုးရာသီမှာ သတိထားရမယ့် အရေပြားမှိုစွဲရောဂါတွေအကြောင်းကို သိပါရစေ ဆရာမ။ ဖြေ ။ မိုးတွင်းမှာ နွေရာသီရဲ့ပူပြင်းလှတဲ့ အပူချိန် လျော့သွားတာကို ခံစားကြရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း...
ကလေး နို့ကိုက်ခြင်း (Breast biting baby)
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ – ဆရာ . . ကလေးက ကိုက်လို့ နို့သီးခေါင်း အပေါ်တစ်ဖက်လုံးကွဲပြီး အနာဖြစ်နေတာမျိုးကိုရော နို့ဆက် တိုက်ရင် ကလေးမှာ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲရှင့်။ ကလေးကို ရောဂါပိုးအလွယ်တကူဝင်နိုင်ပါလားဆရာ။ ကလေးက ချိုစို့နေချိန်မှာ မိခင်နို့ကို ကိုက်ရင် နို့တိုက်တာ ရပ်ထားစရာမလိုပါ။...